Air Canada na-abanye n'ahịa Europe kachasị ukwuu na-enweghị ụgbọ elu trans-Atlantic
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Canada na-abanye n'ahịa Europe kachasị ukwuu na-enweghị ụgbọ elu trans-Atlantic
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • News • Akụkọ gbasara Romania • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Ọbịbịa nke ụgbọ elu Air Canada na 1928 na ọdụ ụgbọ elu Henri Coandă nke Bucharest na-egosi mbido nke ọrụ ụgbọelu Air Canada na-eme kwa izu na Bucharest, Romania. A ga-ejikwa ụgbọ elu Air Canada Rouge Boeing 767-300ER na-arụ ọrụ na-egosi Premium Rouge na Economy klas ọrụ ma na-aga iji bulie njikọta site na netwọọdụ Air Canada site na ọdụ ụgbọ elu nke Air Canada's Montreal.
Benjamin Smith, Onye isi ala, kwuru, sị: “Dịka naanị ụgbọ elu North America na-efegharị Romania, ahịa Europe kachasị ukwuu na-enweghị ụgbọ elu trans-Atlantic, anyị nwere oke nganga ịmalite ụgbọ elu Montreal-Bucharest mbụ anyị, na-eme ka ọnụnọ Air Canada dịkwuo ike na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Europe. , Ndị njem ụgbọ elu na Air Canada. "Air Canada na-aga n'ihu na-eto eto Montreal dị ka ihe dị mkpa ehiwe na anyị zuru ụwa ọnụ na netwọk na-enye ndị ahịa ukwuu nhọrọ, nakwa dị ka ike na-agaghị ekwe omume jikọọ onward site anyị ọtụtụ North American na International network."
“Ana m anabata atụmatụ nke Air Canada iji mepụta njikọ ikuku a kpọmkwem n'etiti Montreal na Bucharest. Ihe okike nke uzo ohuru ohuru a na-aga site na Montreal na-enye anyị ohere imeghe akụnụba anyị na ụwa ma na-enye aka na mmụba nke talent na itinye ego. Anyị ga-aga n'ihu ịzụlite mmekọrịta chiri anya n'etiti obodo anyị yana ịgba ume mmekọrịta mba abụọ, ma ha bụrụ azụmaahịa, nke onwe, omenala, agụmakwụkwọ ma ọ bụ njem nleta, "ka Montréal Mayor Valérie Plante kwuru.
“Malite na taa, Canada na Romania dị nso na awa atọ. Njikọ ọhụrụ a ga-eme ka ọ dịrị ndị na-etinye ego na ndị njem si Romania na Canada mfe ịga njem maka azụmahịa ma ọ bụ oge ezumike. Ọ na-ewetakwa ezinụlọ na ndị enyi nso nke nnukwu obodo Canada-Romania na mpaghara Montreal. Achọrọ m ka Air Canada nwee ihe ịga nke ọma na ọrụ ọhụụ ọ ga-arụ Bucharest,
"Site na mgbakwunye nke Bucharest na ndepụta ogologo oge nke ebe enyere ya site na Montréal-Trudeau, Air Canada na-emezigharị ọrụ ikuku anyị ọzọ ma na-ekwenye ọkwa anyị dịka ọdụ ụgbọ elu mba ụwa niile na mba ahụ," ka Aéroport de Montréal President na Chief Executive kwuru Onye uwe ojii Philippe Rainville. “Njikọ ọhụrụ a bụ ezigbo akụkọ maka obodo Romanian nke Montréal, maka ndị njem na-achọsi ike ịchọpụta ọmarịcha obodo a nke jupụtara n’akụkọ ihe mere eme, yana maka ndị ọchụnta ego. Ọnụ ụzọ ọhụrụ nke ụwa ka meghere maka ha, anyị nwekwara obi ụtọ na ya! ” kwuru Philippe Rainville, onye isi na onye isi nchịkwa nke ADM.
“The ụgbọ elu Montreal-Bucharest bụ nke mbụ ụgbọelu na-ejikọ ụgbọelu n’etiti North America na Romania. Ọ na-emeghe ụzọ maka ịmalite mmekọrịta azụmahịa dị n'etiti Romania na Canada, ma ọ bụrụ azụmahịa, nke onwe, ọdịbendị ma ọ bụ ndị njem. Nke a bụ ezigbo akụkọ maka obodo azụmaahịa Romania na Quebec, bụ nke hụrụ afọ ole na ole na Canada na-adịbeghị anya. Ana m ekele Air Canada na Aéroports de Montréal maka ntinye na mbọ ha itinye ọrụ a. Air Canada nwere ike ịdabere na nkwado anyị iji nyere aka mee ka njikọ ụgbọ elu ọhụrụ a nwee ihe ịga nke ọma ”, Oriaku Adina Georgescu, Onye isi oche nke mercelọ Ahịa Romania nke Quebec kwuru.
Lightgbọ njem na-abata mbido / ụbọchị 2018 nke izu
AC1928 Montreal 18:00 Bucharest 9:55 + 1day June 7 / Oct. 4 Mon., Tọsde
AC1929 Bucharest 13:45 Montreal 16:20 June 8 / Oct. 5 Tuesday, Fraị.
Flightsgbọ elu niile na-enye maka mkpokọta na mgbapụta Aeroplan, uru ndị mmekọ Star Alliance na, maka ndị ahịa tozuru etozu, ntinye ụzọ, Maple Leaf Lounge na Montreal, ịbanye na uru ndị ọzọ.